Saaxiibbaday ayaa tallaabo ka qaadi doona tan, maadaama aan marar dhif ah ka jawaabo taleefankayga… laakiin hey… tani waxay ku saabsan tahay caawinta aad shirkad, aniga maahan! Kororka weyn ee iPhones, Droids iyo taleefannada kale ee casriga ah, runti waa waqtigii aad bilaabi lahayd hagaajinta bartaada si aad ugu adeegsato biraawsarka moobiilka. Waxaan dhawaan u diyaarinay waayo-aragnimo isticmaale gebi ahaanba ka duwan macmiilka, waxaan sii deynay nambarka mobilka ee websaydhka aan dhisnay oo aan ku fiicnaynno isticmaalka iPhone iyo Droid.
In kasta oo shirkaddaadu aysan awoodi karin inay awood u yeelato dib-u-dhiska bartaada oo dhan si loogu isticmaalo moobiilka, waxaa jira hal shay oo fudud oo aad isla markiiba u dhaqangelin karto: hyperlink lambarrada taleefankaaga si dadka isticmaala mobiladu ay si fudud iyaga u gujin karaan oo ay u bilaabi karaan wicitaan taleefan. Qaamuusku waa iska fudud yahay:
A caadiga ah tag barroosinka iyada oo isku xirka shabakadu adeegsado URL-ka qiimaha, xiriir email ayaa adeegsanaya mailtoYnta Qaaciddada lambarka taleefanka waa mid fudud sida. Waxaan tijaabiyey qiimaha leh iyo bilaa waalidnimo, xilliyo iyo jajab wax walbana waxay umuuqdaan inay ka shaqeeyaan labada iPhone iyo Droid. Si kastaba ha noqotee, weli waxaan ku xaddidi lahaa lambarka taleefanka lambarrada dhabta ah ee ku jira qiimaha href.
Kaliya ka fikir inta shil baabuur ee aad dadka ka badbaadin karto sidaa darteed uma baahna inay isku dayaan inay xafidaan ama qoraan lambarka!
Tags: a href tellambar HTML ah lambarka taleefankahtml xiriiriye taleefanXiriirinta lambarka taleefanka htmlhtml taleefoonkahtml khadka taleefankalambarka taleefanka ee hyperlinklambarrada taleefanka ee hyperlinklambarka taleefanka iphone lambarkaxiriir lambarka taleefankaisku xirka wareega wareegaxiriirka mobiladasumadda lambarkaxiriir telefoonka htmllambarka taleefanka xiriiriyalambarka taleefanka xiriir htmltaleefoonkasumadaha taleefankasumadda taleefanka gacantataleefoonka gacantaCalaamadee lambarka taleefanka gacantacalaamadee taleefannada gacantataleefoon lambarlambar taleefan sumadaysantel xiriir html